Tsy ny olona rehetra mifanerasera aminao no mpanjifa. Martech Zone
Ny fifandraisana an-tserasera sy ny fitsidihana tsy manam-paharoa amin'ny tranokalanao dia tsy voatery ho an'ny orinasanao, na ho an'ny mpanjifa ho avy aza. Matetika ny orinasa dia manao fahadisoana amin'ny fiheverana fa isaky ny mitsidika tranonkala iray dia olona liana amin'ny vokatra vokariny, na izay rehetra misintona solosaina fotsy iray dia vonona hividy.
Tsia. Sanatria izany.
Ny mpitsidika tranonkala dia mety manana antony maro samihafa handinihana ny tranokalanao sy handanianao fotoana amin'ny atiny, ary tsy misy ifandraisany amin'ny fahatongavana ho mpanjifa tena izy. Ohatra, ny mpitsidika ny tranokalanao dia mety:
Mijery anao ny mpifaninana.
Ireo mpikaroka asa mitady gig tsara kokoa.
Mpianatra mikaroka taratasy momba ny teny amin'ny oniversite.
Saingy, saika ny olona rehetra tafiditra ao anatin'ireto sokajy telo ireto dia matetika atahorana hahazo antso an-tariby na mijanona ao anaty lisitry ny mailaka.
Ny fametrahana ny mpitsidika rehetra ao anaty siny mpanjifa dia fanao mampidi-doza. Tsy vitan'ny fanodinana loharano be fotsiny ny fanenjehana ny olona tsirairay mizara ny nomeraon-telefaoniny na ny adiresy mailaka, fa mety hiteraka traikefa ratsy ihany koa ho an'ireo olona izay tsy nieritreritra ny ho lasibatra ho an'ny varotra varotra.
Ny fampivadihana ireo mpitsidika amin'ny mpanjifa, na ny fahafantarana fotsiny hoe iza ireo mpitsidika no mendrika hiova, dia mila fahatakarana lalindalina kokoa hoe iza izy ireo. Eto no misy 3D (telo-dimensional) isa isa tonga amin'ny filalaovana.
Ny scoring firaka dia tsy vaovao, fa ny fiakaran'ny Big Data dia nanangana vahaolana vaovao momba ny firaketana 3D fironana izay manampy lalina ny fomba fahitan'ny mpivarotra sy ny mpivarotra ny mpanjifa sy ny vinavinany. Ny scoring 3D dia fivoaran'ny voajanahary ny angon-drakitra sarobidy izay nangoninao tamin'ny mpanjifanao nandritra ny taona maro, ary mampiasa azy io hanompoana tsara an'ireo mpanjifa ireo ary amin'ny farany, hampitombo ny varotrao sy ny faran'ny farany ambany azonao.
Na mifantoka amin'ny paikadin'ny varotra B2C na B2B ny orinasa, ny isa isa 3D dia afaka manampy azy ireo handrefesana ny haben'ny fanantenana sy ny mpanjifa mifanaraka amin'ny mombamomba azy ireo "idealy", eo am-panarahana ny haavon'ny fifamatorany sy ny fanoloran-tenany. Io dia miantoka fa ny olona tena afaka mividy no ifantohanao, fa tsy manary harato malalaka sy lafo — hahatratrarana ireo mpitsidika rehetra tonga teo amin'ny tranokalanao.
Voalohany, fantaro ny demografika na ny firmagraphics
Hamboarinao ny isa 3D amin'ny alàlan'ny famantarana ny mpanjifanao. Ho fantatrao hoe “Iza io olona io? Mety amin'ny orinasako ve izany? ” Ny karazan'orinasa misy anao dia hamaritra izay mombamomba anao hampiasanao ny isa 3D amin'ny mpanjifanao.
Ny fikambanana B2C dia tokony hifantoka amin'ny tahirin-kevitra momba ny demografika, toy ny taonany, ny lahy sy ny vavy, ny fidiram-bolany, ny asany, ny toetoetran'ny fanambadiana, ny isan'ny ankizy, ny rakipeo an-tranony, ny kaody zip, ny famandrihana famakiana, ny maha-mpikambana sy ny mpikambana ao aminy, sns.
Ny fikambanana B2B dia tokony hifantoka amin'ny firmagraphicdata, izay misy ny fidiram-bolan'ny orinasa, taona maro amin'ny asa aman-draharaha, isan'ny mpiasa, ny akaikin'ny tranobe hafa, ny kaody zip, ny satan'ny vitsy an'isa, ny ivon'ny serivisy sy ny anton'izany.
Ny ampahany faharoa amin'ny isa 3D dia ny firotsahana
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia te hahafantatra ny fifandraisan'ity mpanjifa ity amin'ny marikao ianao? Ao amin'ny seho varotra ihany ve no ahitany anao? Miresaka aminao an-telefaona tsy tapaka ve izy ireo? Manaraka anao ao amin'ny Twitter, Facebook ary Instragram ve izy ireo ary mijery ao amin'ny FourSquare rehefa mitsidika ny toerana misy anao ianao? Manatevin-daharana ireo webinaranao ve izy ireo? Ny fomba fifandraisan'izy ireo aminao dia mety hisy fiatraikany amin'ny fifandraisan'izy ireo aminao. Ny fifandraisan'ny tena manokana matetika dia midika ho fifandraisan'ny tena manokana.
Fahatelo, fantaro hoe aiza ny fifandraisan'ny mpanjifanao aminao
Raha mbola tsy vita ianao dia mila mizara ny angon-drakitrao araka ny faharetan'ny mpanjifanao. Mpividy mandritra ny androm-piainana ve izy ity izay nividy ny vokatra rehetra anananao? Mpanjifa vaovao ve ity izay tsy mahalala ny tolotra rehetra ataon'ny orinasanao? Araka ny azonao an-tsaina, ny karazana mailaka alefanao amin'ny mpanjifa maharitra iray dia samy hafa be amin'ilay andefasanao olona am-piandohan'ny fifandraisany aminao.
Na dia maro aza ny mpivarotra no mizara ny tahiry amin'ny demografika na firmagraphics fotsiny, dia mila izany mora tohina amin'ny sehatry ny mpanjifa amin'ny androm-piainany ary miantehitra bebe kokoa amin'ny isa 3D. Ny mpanjifa vaovao izay nandefa mailaka anao fotsiny dia tsy ho matanjaka toa ny mpanjifa maharitra nitsidika ny biraonao. Toy izany koa, ilay olona nihaona taminao tamin'ny seho ara-barotra dia mety ho mpanjifa malemy kokoa noho ilay nividy mangina taminao nandritra ny dimy taona. Tsy ho fantatrao izany raha tsy misy isa 3D.
Omeo rehetra mitsidika ny fitsaboana amin'ny fonon-tànana fotsy.
Ao anatin'ireo lahateny rehetra ireo momba ny fampiasana scoring 3D fironana hifantohana amin'ireo mpitsidika manana ny fividianana entana dia ho tofoka aho raha tsy nilaza aho fa ny fifandraisana amin'ny mpitsidika rehetra dia tokony ho traikefa amin'ny fitsaboana fotsy fotsy - mitandrina, sariaka ary vahaolana -mba mahazo sitraka amin'ny mpitsidika. Tadidio fa tsy ny fanaovana vola be amin'io fivarotana voalohany io. Ny fanomezana izay tena ilain'ny mpitsidika, izay hiafara amin'ny fanandramana mpanjifa tsara sy ny varotra amin'ny ho avy. Atolory ity fahalalam-pomba ity amin'ny mpitsidika rehetra, na ny mpifaninana, na mitady asa, na mpianatry ny oniversite. Tsy fantatrao mihintsy hoe rahoviana ny hatsaram-panahy kely iray no handoa dividends avy eo.
Tsy afaka mahita mpanjifa sahaza indrindra fotsiny ianao. Tokony hamboly azy ireo ianao. Ahoana? Amin'ny alàlan'ny famelana azy ireo hifindra milamina amin'ny dingana tsirairay amin'ny androm-piainana, mahita ny atiny mety na fifandraisana tadiavin'izy ireo eny an-dàlana. Ity no tanjaky ny vahaolana Marketing Right On Interactive izay mivelona amin'ny fiainana: manome hery ny fikambanana hahafantatra tsara hoe aiza no misy ny prospect na ny mpanjifa mifandraika amin'ny marika iray - manomboka amin'ny vinavina mankany amin'ny mpankafy lafaoro - ary ny fomba tsara indrindra hanatonana azy ireo hahalavorary lanja ny androm-piainany.
Disclosure: Miorina amin'ny Interactive dia mpanjifanay ary mpanohana ny Martech Zone. Hahafantatra bebe kokoa momba ny vahaolana momba ny varotra androm-piainany anio:
Mianara bebe kokoa momba ny Right On Interactive
Tags: Scoring 3db2bb2cmpifaninanaCustomerandrom-piainan'ny mpanjifamarketing amin'ny fiainana andavanandron'ny mpanjifaMponinafirmagraphicsfirmografikampianatra mitady asascoring firakampitsidika an-tseraseramahitsy amin'ny interactivempitsidikampitsidika tranonkala
Torohevitra ho an'ny marika hitazomana ny fahana Twitter
Rindrambaiko Twitter roa tsy maintsy ananana amin'ny fitantanana mpanaraka